WhatsApp inokwana spyware - TELES RELAY
HOME » kambani »WhatsApp inopinda spyware
WhatsApp inokwana spyware
WhatsApp yakurudzira vashandisi vayo vese vanosvika mabhiriyoni 1,5 kuti vavandudze mapurogiramu avo senzira yekuchengetedza.
Hackers vave vakaisa spyware panzvimbo yakatarwa kumafoni emafoni uye nemamwe madivashoni achishandisa chikamu chakakura mumushumo weAssApp.
WhatsApp, iyo Facebook, inotaura kuti kurwisana kwakananga "nhamba shoma" yevashandisi uye yakarongedzwa ne "advanced cyberactor".
Chigadziri chakaitwa musi weChishanu.
Musi weMuvhuro 13 May, WhatsApp yakurudzira vashandisi vayo vese BHNUMX kuti vavandudze mapurogiramu avo sekuchengetedza.
Iko spyware yakabatanidzwa yakagadzirwa nekambani yeIsrael NSO Group, maererano neThe Financial Times.
WhatsApp, Instagram naMutumwa vachabatana
Facebook yakagadzirirwa yekutanga kukanganisa kwaNesApp muna May.
WhatsApp is "yakachengeteka" yekukurukurirana kwekushanda nekuti mharidzo inonyorwa mumagumo ekupedzisira, izvo zvinoreva kuti zvinofanira kungoratidzwa chete nenzira inogona kuverengeka pamutambo wemutumisi kana mupiki.
Zvisinei, spyware ingadai yakaita kuti muchengeti averenge mharidzo pachigadziro chechinangwa.
"Vatapi venhau, vanyori vezvemitemo, vatsigiri uye vadziviriri vekodzero dzevanhu" ndivo vanogona kunge vakambotarisirwa, maererano naHamid Zidan weKomiti Yokudzivirira VaNews.
WhatsApp inotaura kuti kurwisana kunotora "nhamba shoma" yevashandisi uye yakarongedzwa ne "advanced cyberactor".
Nzira yekuvandudza WhatsApp?
Dhaisa menyu kumusoro kwekuruboshwe kwekona
Dhapa "Zvishandiso zvangu nemitambo"
Kana WhatsApp ichangobva kuongororwa, ichaonekwa pane zvakarongwa zvepurogiramu ine bhoti inoti "Vhura"
Kana WhatsApp isina kumbovandudzwa, bhodhi rinoti "Update". Tapira "Update" kuti uise iyo shanduro itsva.
Shanduro yezvino ye Whatsapp pane Android ndiyo 2.19.134
Pazasi kwekona, tapota "Updates"
Shanduro yezvino ye WhatsApp pa iOS ndiyo 2.19.51
Media playback haibatsiri pafoni yako
Whatsapp inopera kune zvishanu nhamba yekutsvaga kutumira mharidzo
Ko kuchengetedzwa kwekuchengetedzwa kwakashandiswa sei?
Hackers vakashandisa WhatsApp's voice call feature kuti vaise chigadzirwa chevanhu vakatarwa. Kunyange kana kudanwa kusina kubudirira, spyware yakaiswa. Maererano neHedding Times, kudanwa kwacho kwaitadza kuparara kubva pafoni yefoni.
WhatsApp akaudza BBC kuti boka ravo rekuchengetedza ndiro raiva rokutanga kuzivisa kukanganisa uye akagovera ruzivo urwu nemapoka evanhu vane kodzero dzevanhu, vasarudzo vakachengetedzwa nevashambadziro uye Dhipatimendi reUrumende reUnited States. Kururamisira, pakutanga kwemwedzi.
"Kurwisa kwacho kune zvinhu zvose zvekambani yega yega inoshanda nehurumende kuti ipe spyware inopinza mabasa emafaira ekushandisa mafoni," iyo kambani yakati Muvhuro, May 13, mu chidziro chekunyora kwevatapi venhau.
Kunyange zvazvo mamwe makambani ekuchengetedzwa kwekuchengetedzwa kwehupfumi ari kukanganisa zvikanganiso zvavanowana kuti avaruramise, vamwe vanozvichengeta zvakavanzika kuitira kuti vashandiswe kana kutengeswa kuvane masimba.
Ndiani ari shure kwe spyware?
Iko boka reNSO ikambani yeIsrael inofungidzirwa se "cybernetic dealer".
Kunyange zvazvo mamwe makambani ekuchengetedzwa kwekuchengetedzwa kwekombiyuta ari kukanganisa zvikanganiso zvavanowana kuti agadzirise, vamwe vanozvichengeta zvakavanzika kuitira kuti vashandiswe kana kutengeswa kuvane masimba.
Nhengo yeNSO ine chikamu chayo chiri neLondon-based private equity firm Novalpina Capital, iyo yatora danda munaFebruary.
Uganda inobvumira WhatsApp tax
NSO's flagship software, Pegasus, inokwanisa kukwanisa data kubva pane chimwe chinhu chakakosha, kusanganisira nemaikorofoni, kamera uye geolocation.
"Unyanzvi hweNSO hwakabvumidzwa kune hurumende dzakagamuchirwa hurumende nokuda kwechinangwa choga chokurwisa uipi nehugandanga (...). Tinoongorora chero zvikonzero zvinotendeseka zvekusashandisa zvisina kunaka uye, kana zvichidiwa, kutora matanho, kusanganisira kupedza urongwa, "anodaro kambani yeIsrael.
Maererano naDanna Ingleton, Mutevedzeri weMutungamiriri weAmnesty Tech, kune humwe huripo hunoratidza kuti zvishandiso izvi zvakashandiswa nehurumende kuti vasarudze vashandi vanozivikanwa uye vatapi venhau.
Ndivanaani vanhu vari kutarirwa?
Maererano ne WhatsApp, inenge ichangotanga kusvika pakuziva nhamba yevashandisi vakavhiringidzwa nechokukanganisa. Ndezvipi izvo ndezvokuti zvinonzi kutambudzwa zvakanyanyiswa.
Amnesty International, iyo inoti yakakonzerwa nezvigadzirwa zvakagadzirwa neboka reNSO, rinotaura kuti rudzi urwu rwekurwisa rwakatya nguva refu.
"Vanokwanisa kutapura foni yenyu kunze kwekuti musaita chero chinhu chipi zvacho," akadaro Danna Ingleton, Mutevedzeri Mukuru weAmnesty Tech.
Akavhiringidza Indaneti muChad
Maererano naye, kune humwe huripo huri kukura hwokuti zvishandiso izvi zvakashandiswa nemahurumende kuti aongorore vashandi vanozivikanwa uye vatapi venhau.
"Panofanira kuva nemutoro, haikwanise kuenderera mberi seSe Wild West, semabhizimisi akavanzika," akadaro Deputy Deputy Director of Amnesty Tech.
Dare reTel Aviv riri kutarisa chikumbiro chakatangwa naAmnesty International musi weChipiri, 14 May, achikumbira hurumende yeIsrael yeZviviri kuti idzose reisheni yeboka reNSO, ichibvumira kutumira zvigadzirwa zvayo.
Maererano ne WhatsApp, inenge ichangotanga kusvika pakuziva nhamba yevashandisi vakavhiringidzwa nechokukanganisa.
Mibvunzo inoramba isina kupindurwa
Vanhu vangani vakatarwa? WhatsApp inoti inenge ichangotanga kusvika kuti ione kuti vanhu vangani vakambotarisirwa, kana kuti yakareba zvakadini pangave iripo mu-app.
Inovandudza WhatsApp kubvisa spyware? WhatsApp haina kutaurira kana kushandiswa kwechirongwa chekupedzisira chekushandiswa kuchibvisa spyware iyo yatotapukisa chigadziriso chakakanganiswa.
Chii chinonzi spyware chingaita? WhatsApp haana kutaura kana kurwisa kunogona kupfuurira kudarika zvinorehwa ne WhatsApp, kufambira mberi mune imwe kero uye mairi emafiro ekufambisa, mapikicha, nezvimwe.
Ghana: WhatsApp pane muezzin?
"Kushandiswa kwechikumbiro senzira yekurwisa kunogadziriswa paIOS nokuti inoshandisa zvikumbiro mumatombo ebhokisi," akadaro Purofesa Alan Woodward weYunivhesiti yeSurrey. "Isu tose tinofunga kuti kurwisa kwacho kwaingova uori hwe WhatsApp, asi kuongorora kuchiri kuenderera mberi," anoenderera mberi.
BBC yakatsvaga tsanangudzo kubva kune WhatsApp.
I "cyber-blackout", mamiriro matsva muAfrica
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.bbc.com/afrique/monde-48272720
William anoratidza zvinetso zvoutano hwepfungwa
Human Rights Watch inobata hurukuro paIndaneti pamusoro penhamo yeAnglophone